Howlo Qaliimo ah oo ka socda isbitaalka guud ee Garoowe – Radio Daljir
Howlo Qaliimo ah oo ka socda isbitaalka guud ee Garoowe
Garoowe,Jan,1 -Cusbitaalka magaalada Garowe ayaa ilaa hada ka socda howl caafimaad oo loo qabanayo dadka faruuran iyo qaliimo kale oo bar bar socda kaas oo ay wado wasaarada caafimaadka dawladda Puntland.
Dadka adeegaan lacag la’aantaa ka faa’iidaysana ayaa waxa ay ka kala yimaadeen deegaanada Puntland iyo gudaha dalka Somaliya iyo deegaanada Ethiopia.
Wasiirka caafimaadka dawladda Puntland Dr Cali C/laahi Warsame ayaa sheeegay in howshu si wanaagsan u socoto ayna ka faa’iidaysanayaan dad aad u fara badan oo isugu jira caruur iyo waayeelba.
Dhakhaatiirta adeega lacag la’aantaa fulinaya ayaa waxa ay isugu jiraan dhakhaatiir African ah iyo kuwo kale oo u dhashay qaarada Aasiya kuwaas oo wasaaradu ay sahashay inay yimaadaan deegaanada Puntland.
Dr Cali C/laahi Warsame waxaa uu sheegay ilaa hada inuu wakhti ku filan harsan yahay dad dheeraada inay kusoo gaaraan magaalada Garowe si ay uga faa’iidaystaan howlahan caafimaad ee lacag La’aantaa iyo qaliimada kale.
Howlahan caafimaad ayaa waxaa ay noqonayaan markii labaad ee lagu qabto magaalada Garowe inkastoo wwasaaradu sheegtay in nidaam shaqo loo samayn doono doorka soo socda kaas oo dhakhaatiirtu ku gaarayaan magaalooyinka kale.